Moldova: “Taokanto An-drindrina” sy Sary Hafa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2017 2:18 GMT
dittaeva, mpampiasa Flickr , avy ao Leikanger, Norvezy, dia nitetitety ny manodidina an'i Moldova niaraka tamin'ny rahalahiny tamin'ny fahavaratry ny taona 2016, ary naka sary ity takelaka norariana ity teny an-dàlana avy any amin'ny seranampiaramanidina Chisinau ho any Colonita. Ny endrika hita eo amin'ny rindrina dia toa ny an'ilay poety Vladimir Mayakovsky.
Misy ihany koa angona iray hafa avy ao amin'ny tranombakoky ny ady ao Transnistria, faritra iray lasa mizaka tena ao anatin'i Moldova nanomboka tamin'ny 2 Septambra 1990, saingy “mbola mitohy ho olana ifandirana hatramin'izao ny sata maha-ara-dalàna azy”. Ity ny teny fampidirana nataon'i dittaeva ho an'ilay andian-tsary:
Ireto dia sary avy ao amin'ny tranombakoky ny ady ao Bender, Transnistria, Moldova. Niezaka ny nanao izay tratrako aho handrakotra ilay fampirantiana manontolo. Tsy nahazoanay setry ny fangatahanay fa kosa nahazo fitarihan-dia mahafinaritra sy matotra nataonà mpitaridia miteny rosiana izahay, izay tamin'ny fomba matianina tokoa no nandikàn'i Daria azy ho amin'ny teny Anglisy. Any an-trano dia manana ihany koa aho boky kely iray avy tao amin'ilay tranombakoka.
Tsarovy fa Transnistria dia teo ambany fitondràna jadona tsy lavitry ny kaominisma, izay mahay ny fomba atao ho fampielezana hevitra (topazo maso fotsiny at amin'ny www.pridnestrovie.net).
(Misy lahatsoratra iray an'ny Wikipedia momba ny ady nifanaovan'i Moldova sy Transnistria ato.)